တိရစ္ဆာန် - ဝီကီပီးဒီးယား
၀၅:၀၂၊ ၁၆ ဇွန် ၂၀၂၀ နေ့က Mayor mt (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) တည်းဖြတ်သည့်မူ
ဤဆောင်းပါးကို သတ္တဝါ နှင့် ပေါင်းစပ်ရန် အကြံပြုထားပါသည်။ (ဆွေးနွေးရန်)
ဝစ်ရှင်နရီ၊ အခမဲ့အဘိဓာန်တွင် တိရစ္ဆာန် ကို ရှာဖွေကြည့်ရှုပါ။
လက်ယာရစ် အပေါ်ဘယ်⁠ဘယ်ပိုင်း ကစ - Loligo vulgaris (a mollusk)၊ Chrysaora quinquecirrha (a cnidarian)၊ Aphthona flava (an arthropod)၊ Eunereis longissima (an annelid) နှင့် Panthera tigris (a chordate).
တိရစ္ဆာန်သည် ဒိုမိန်း ယူကာရိုတာအုပ်စုကြီး၏အောက်တွင် ရှိသည်။ တိရစ္ဆာန်လောကဟု သိရာ၏။ ဒိုမိန်း ယူကာရိုတာအောက်တွင် ၎င်းအပါအဝင် နောက်ထပ် လောက သုံးခု ရှိ၏။ ၎င်းတို့မှာ (၁) ပရိုတစ္စတာ လောက(၂) အပင် လောက (၃) မှို လောက ဟူ၍ မှတ်သားရသည်။
၁ ဝေါဟာရ ဖြစ်ပေါ်ပုံ
တိရစ္ဆာန်သည် ပါဠိသဒ္ဒါဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်အမည် "animal" သည် လက်တင်သဒ္ဒါ animale (ပင့်သက်အရှင်) မှ ဆင်းသက်လာသည်။ ဇီဝဗေဒတွင် အသုံးပြုသော သဒ္ဒါသည် လောက (Kingdom) ကိုညွှန်းသည်။
အချို့နိုင်ငံဒေသများ၌ သိပ္ပံနည်း မကျသော အသုံးအနှုန်းများကို ကိုင်စွဲကာ တိရစ္ဆာန်ဟူသော ဝေါဟာရမှ လူသားများကို ဖယ်ထုတ်ထားသည်။ အနှီသူတို့ ဆိုလိုသည်မှာ တိရစ္ဆာန် လောကတွင် လူသားမဟုတ်သော တိရစ္ဆာန်များ ပါဝင်ကာ လူသားနှင့် လွန်စွာ နီးစပ်သော အခြားနို့တိုက်သတ္တဝါများနှင့် ကျောရိုးရှိတိရစ္ဆာန်များကိုမူ ချွင်းချက် မရှိ ထည့်သွင်းထား၏။ (In everyday non-scientific usage the word excludes humans – that is, "animal" is often used to refer only to non-human members of the kingdom Animalia; often, only closer relatives of humans such as mammals, or mammals and other vertebrates, are meant.)
တိရစ္ဆာန်ဟူသော ဝေါဟာရကို ဇီဝဆိုင်ရာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်၌ ရေမြှုပ်ကောင်များ၊ ပင်လယ်ခူ၊ အင်းဆက်များ နှင့် လူသားများအထိ လွှမ်းခြုံထားသော တိရစ္ဆာန် လောကအတွင်းရှိ အဖွဲ့ဝင်အားလုံးကို ဆိုလိုသည်ဟု ဖွင့်ဆို၏။ (The biological definition of the word refers to all members of the kingdom Animalia, encompassing creatures as diverse as sponges, jellyfish, insects, and humans.) 
Deuterostomes ဒုတိယအပေါက် ပါရှိသော တိရစ္ဆာန်များတွင် အဓိကအားဖြင့် ပါဝင်လျှက်ရှိသော Phylum များမှာ Echinoderm (ပင်လယ်မျှော့နှင့် ကြယ်ငါး) နှင့် ကျောရိုးရှိ တိရစ္ဆာန်များ (Chordata) ဟူ၍ နှစ်မျိုးခွဲထားသည်။ ကျောရိုးရှိ တိရစ္ဆာန်များတွင် ငါး၊ ကုန်းနေရေနေ သတ္တဝါ၊ တွားသွားသတ္တဝါ၊ ငှက်နှင့် နို့တိုက်သတ္တဝါများပါသည်။
↑ မာရီယမ် ဝဘ်ဆတာ၏ တိရစ္ဆာန် ဆောင်းပါး
↑ အမေရိကန် ဟာရီတေ့ အဘိဓာန်
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တိရစ္ဆာန်&oldid=520176" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ ဇွန် ၂၀၂၀၊ ၀၅:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။